Kana takabva kumhuka, upenyu hwedu hahuna chinangwa. Asi kana takasikwa, tinogona kuwana mhinduro yemibvunzo yakadai sekuti takasikirwei uye takanangepi.
Chimbofungidzira izvi: Alex haachazivi kuti chokwadi ndechipi. Kukura kwake aiti Mwari ndiye akasika zvinhu zvose. Asi nhasi mudzidzisi wake webiology anga achiti takabva kumhuka uye kuti masayendisiti anozvitsigira. Alex haadi kusekwa saka azongoguma afunga kuti, ‘Kana masayendisiti aine uchapupu hunotsigira zvavanotaura, iniwo zvangu ndingati kudii?’
Kudai uriwe Alex, waizongobvuma nemhaka yekuti ndizvo zvinotaurwa nemabhuku ekuchikoro here?
Vamwe vanongotaura kuti zvinhu zvakasikwa uye vamwe vachiti zvakangoerekana zvavapo. Kakawanda kacho havanyatsoziva zvikonzero zvinoita kuti vadaro.
Vamwe vanongotenda kuti zvinhu zvakasikwa nekuti ndizvo zvavakadzidziswa kuchechi.
Vamwe vanotenda kuti zvinhu zvakangoerekana zvavapo nekuti ndizvo zvavakadzidziswa kuchikoro.
MIBVUNZO 6 YEKUFUNGA NEZVAYO
Bhaibheri rinoti: “Imba imwe neimwe inovakwa nomumwe munhu, asi iye akavaka zvinhu zvose ndiMwari.” (VaHebheru 3:4) Mashoko aya ane musoro here?
Kutaura kuti hakuna Musiki, kwakafanana nekutaura kuti imba iyi yakangoerekana yazviti dzi
ZVINOTAURWA NEVAMWE: Zvinhu zvose zvakavapo netsaona.
1. Tsaona yacho yakakonzerwa nei?
2. Zvine musoro ndezvipi, kutaura kuti zvinhu zvakavapo netsaona, kana kuti pane akaita kuti zvivepo?
ZVINOTAURWA NEVAMWE: Vanhu vakabva kumhuka.
3. Kana vanhu vakabva kumhuka dzakafanana nemakudo, nei vaine pfungwa dzakapinza kuadarika?
4. Kana munhu achikwanisa kugadzira michina inoita zvinhu zvinoshamisa, ko kuzoti wacho akagadzira munhu?
ZVINOTAURWA NEVAMWE: Pane uchapupu hwokuti zvinhu zvakangoerekana zvavako.
5. Munhu ari kutaura izvozvo akanyatsoongorora here kuti aone kana chiri chokwadi?
6. Vangani vanoti zvinhu zvakangovapo zvega nekuti vakaudzwa kuti masayendisiti uye vanhu vanoremekedzwa vanozvitsigirawo?
“Paunenge uchifamba musango, ukaona imba yakanaka yemapuranga, ungati here: ‘Pane miti yadonha zvakarongeka pachibva pabuda imba iyi.’ Haungambodaro! Zvinhu zvakadaro hazviitiki. Saka zvine musoro here kutaura kuti zvose zvakangoerekana zvavapo?”—Julia.
“Ngatitii mumwe munhu okuudza kuti pane fekitari inoprinda mabhuku yaputika uye ingi yamwayiwa pose pose uye paerekana pagadzirika duramazwi. Ungazvibvuma here?”—Gwen.
NEI UCHITI MWARI ARIKO?
Bhaibheri rinokukurudzira kuti ushandise ‘simba rako rekufunga.’ (VaRoma 12:1) Saka kutenda kwaunoita kuti Mwari ariko hakufaniri kungobva pane
ZVAUNONZWA NECHEMUMWOYO (Ini ndinoona sekuti pane ariko ane simba rakawanda kutipfuura)
ZVINOTAURWA NEVANHU (Vanhu vekwandinogara vanoita zvechechi)
ZVAUNOUDZWA NEVAMWE (Vabereki vangu vakandidzidzisa kuti nditende kuti Mwari ariko saka hapana marambiro andingazviita)
Unofanira kuva nezvikonzero zvine musoro zvinoita kuti utende kuti Mwari ariko.
“Pandinenge ndiri mukirasi ndichiteerera mudzidzisi wangu achitaura mashandiro anoita miviri yedu, ndinobva ndanyatsoona kuti zvechokwadi Mwari ariko. Nhengo imwe neimwe yomuviri wedu ine basa rainoita, kunyange kanhengo kadiki-diki kane basa rakanoita uye zvimwe zvinoitwa nomuviri wedu hatitombozvizivi. Muviri wemunhu unoshamisa chaizvo!”—Teresa.
“Pandinoona zvivako zvine nhurikidzwa dzakawanda, chikepe chihombe, kana kuti mota, ndinozvibvunza kuti, ‘Ndiani akazvigadzira?’ Zvinoda munhu akachenjera chaizvo kuti pagadzirwe mota nokuti ine tunhu tuduku twakawanda tunofanira kushanda zvakanaka kuti mota iyoyo ifambe. Kana paine munhu akagadzira mota zvinoreva kuti panewo akasika vanhu.”—Richard.
“Pandairamba ndichidzidza sayenzi ndipo pandaiona kuti dzidziso yokuti vanhu vakatanga vari mhuka haisi yechokwadi. . . . Kana ndiri ini hangu ndinoona sokuti zvakaoma kuti ubvume kuti vanhu vakatanga vari mhuka pane kuti ubvume kuti Mwari ndiye akavasika.”—Anthony.
Atova makore akawanda masayendisiti achiongorora nezvenyaya iyi, asi nanhasi haasati ava netsanangudzo yavanonyatsowirirana vose. Saka iwe ungazonzi wakanganisa here kana usingabvumi kuti zvinhu zvose zvakangoerekana zvavako?
Ngatitii mumwe wekuchikoro kwenyu anokuudza kuti: “Ini handibvumi kuti Mwari ariko. Ko iwe?” Nyora kuti ungamupindura uchitii.
Ona vhidhiyo inonzi Zvinotaurwa Nevezera Rako—Kutenda Kuti Mwari Ariko iri pawww.jw.org. (Tarisa pakanzi ZVINODZIDZISWA NEBHAIBHERI > VARI KUYARUKA)